Omunye main Sochi ezikhangayo e zaseCaucasia Biosphere Reserve kuyinto Grove yew-esihlahleni e Khost. Igama liyazikhulumela, ziphephile main nazi boxwood futhi yew berry. Nokho, ngaphandle nje lezi zitshalo emangalisayo emahlathini ungabona eziningi zama-kwezinhlobo zezinyoni ezingavamile kakhulu futhi engavamile izitshalo.
Ugodo lwe-yew-isihlahla Grove e Khost has imizila emibili - amasongo amabili. A ring esifushane, ibizwa ngokuthi SAMSHEETOVOY has amakhilomitha amabili ubude. futhi ende ring umzila has a ubude amakhilomitha amahlanu. Ngendlela oluya kude abahambi bathole izakhamuzi eziningi zasendulo yemithi, eminyaka ubudala emifantwini Karst, emanxiweni i enqabeni wangekhulu le-12 basendulo. Nge emaweni anezinguzunga zamadwala emehlweni zigodi ebabazekayo Hosta River. On the imizila anemisila ezindaweni ezikhethekile ukuze bakwazi ukuhlala phansi uphumule, bathole amandla namakhono ukulandela ku - phambili ekufuneni ukwazi okungaziwa. zinhlobo bayo basendulo izitshalo bangaziqhayisa yew-isihlahla Grove e Khost, isithombe izinhlobo eziningi relict ukuqinisekisa ubukhulu babo obubabazekayo nobuhle. zezimila Local basinda Ubudala Ice, phakathi kwesikhathi lapho ukubulala amabhere emhumeni, mammoth, Colchis imithini kanye nama-moose giant. Kuyinto kulezi zindawo kungenzeka ugxumela zasendle, nemvelo lasendulo, bheka sendawo, kwenye indawo.
Ugodo lwe-yew-isihlahla Grove e Khost
Ukuthola kule ndawo akunzima. Nge-Spa Avenue kufanele baphenduke umninindlu, endleleni kuzoholela uqobo. Grove ngokuphepha ukubizwa Museum ezivulekile. Lapha ziqoqwa zezimila relict, okungukuthi, lezo ngasinda ingashintshiwe kusukela ezikhathini komlando. lapha kuphela uhlangabezana endleleni isitshalo sendawo ukuba imbulunga yonke bangaboni ikuphi. Ukuhamba phakathi Grove yew-boxwood wamangala ukuqala ukuzizwa emkhathini okhokho bethu wahlala lapho. Ezinye izihlahla lapha abaneminyaka iminyaka eyizinkulungwane ezimbili! Lokho kusho ukuthi bakhulisa emuva esikhathini lapho iisus hristos yena waphila kulomhlaba ofayo. Wonke umuntu lapha azizwa imizwa nje Amazing.
Ezikhangayo esemqoka Grove
Ezikhangayo esemqoka kule Museum yemvelo kungenziwa ngokuthi boxwood Colchis futhi yew. Boxwood ubizwa nangokuthi "yensimbi esihlahleni". Lo muthi uhlukile zazo, ukhuni yayo kuminyene okungahambisani ukucwila emanzini. Ugodo lwe-yew ngokuthi mahogany ukhuni it has amandla okusezingeni eliphezulu futhi ungalokothi onakala. Futhi boxwood futhi yew kakhulu isikhathi eside, zikhula kancane, amasongo yonyaka ku okwabonwa usike mncane ukuze nje abakwazi ukubona.
Ugodo lwe-yew-isihlahla Grove e Khost has a, ucezu kakhulu amahle, ubizwa ngokuthi "uxhaxha". Uma ukholelwa ukuthi abacwaningi, kule ndawo eminyakeni eyizigidi edlule akha iphutha zomhlaba. Ngenxa yalokho, lo ungqimba limestone kancane kancane sigudluke, futhi ngenxa yalokho bakha amahle kakhulu futhi eyingqayizivele idwala kumhambela.
Nge amanye amasayithi ukunikela imibono emangalisayo zezimpi emfuleni. Kubathandi indawo yemvelo yokuthola Libaluleke esinengekayo yew-esihlahleni e Khost. Izibuyekezo zezivakashi lingachazwa ngokuthi nomdlandla, egcwele imizwelo futhi injabulo. Lapha yonke indawo Wendlala ukunambitheka esiyingqayizivele. Ngisho izimbali ezincane ukuhogela ukuze kuqala nephunga, bese ukuthola umthombo waso. Iningi izihlahla ehlathini embozwe moss green, inikeza endaweni wendawo a fabulous, ukubukeka engaqondakali. Yonke indawo ngezwa icula, ngokuvamile abazi ngimuke, ngisho noma uthola eduze kakhulu.
Uma uya ku-uhambo ...
Uma uhambo lwakho izinhlelo - yew-isihlahla Grove e Khost, indlela ukusuka Adler ikutshela yimuphi umqhubi uhambo. Ukukhetha boxwood indandatho encane, qiniseka ukuthi uhambo ngeke eyisicefe. Lapha emhlabeni kukhona izindlela ukhonkolo, ungakwazi hit ngisho emgwaqeni ezinyathelweni zakhe. Okungabalulwa le "uxhaxha", lapha kufanele angene endleleni ihlathi.
ngokwengxenye enkulu iringi ukuhamba isikhathi eside futhi eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Uthatha cishe kwamahora amathathu, kungena akuyikubakho izindlela bushelelezi. Umzila sidlula izindlela ihlathi (nemithambeka, ngamakheshi). Khohlwa flip-flops, izithende, izicathulo ukhetho best - kungcono izicathulo ezemidlalo. Ukuze uthole elambile endleleni, can sinikeza sandwich ezimbalwa - umzila azikho amathilomu, izitolo kanye boutiques. Indlela engcono ukuthatha ubhaka hhayi isikhwama semali. Ungakhohlwa amanzi! Ende ring - umzila kunalokho eyinkimbinkimbi ke wathumela kulabo bayaqiniseka amakhono abo. Kodwa nge eminye imizwelo kanye nemigqondo izivakashi ebuya ukushaywa - amagama ungadluli!
Ugodo lwe-yew-isihlahla Grove e Khost. ikheli
Ukuze uthole kule ndawo emangalisayo akunzima kusuka kunoma iyiphi esifundeni Sochi. Uma eza kuwe kusukela maphakathi Sochi, esiteshini ibhasi, yenza noma yiziphi ibhasi, elandela bebheke Adler. Ngaphambi nje kwebhuloho (phezu Sebawoti umfula) kukhona stop "Blue Hill", bese lapha. Ukuya ngqo ngomgwaqo Samsheetovoy, kulula ukuba bahambahambe kakhulu emnyango, lapho uzobona amagama "Ugodo lwe-yew-isihlahla Grove" (Khost).
Kanjani ukusuka Adler? It silula futhi. Thatha noma iyiphi ezokuthutha zomphakathi, esishukumisela bebheke Sochi, yodwa kuze thola cishile angathanda yini ukuya umninikhaya. Yehla e Blue Hill uhambahambe isigamu sekhilomitha up emgwaqweni ukuze Grove Samsheetovoy kakhulu.
Uma ushayela imoto yakho siqu kusuka Sochi, ilungelo sisuka emgwaqweni omkhulu ujike ngakwesokudla aphethe, kulandele Samsheetovoy emgwaqweni - ngqo emnyango. Indlela esuka Adler futhi akunzima. Wena miss vula Kudepsta ithuba lesibili ziyoba umninikhaya. Ngokudlula kwebhuloho, jikela ngakwesokudla phambi kwakho - Boxwood Street.
United States Izikhangibavakashi - emangalisayo kude
Visa eKorea: izinhlobo kanye imibhalo edingekayo
Troitskaya Tower - lalisemzileni oya ezimayini ezibiyele
I-US impi futhi Japan: Eminyakeni, izimbangela zezinkumbulo ukulahlekelwa
Kulakova Galina Alekseevna: Biography nesithombe
"Aurora" (ukugunda izinwele) at esiqongweni ukuthandwa
Tincture black ziyadliwa - umuthi omkhulu futhi eyingqayizivele-antibiotic
Maxim Golovkin - umzalwane Gennady Golovkin. Biography kanye Izithombe